सु’हागरा’तमै गरे पतिले यस्तो कु’कर्म, नव विवाहिता श्रीमती भइन् बे’होस, अस्पताल लादा डाक्टरले उपचार गर्न नसक्ने जवाफ दिए !
सु’हागरात जीवनभरका लागि सम्झनयोग्य हुनुपर्छ । तर, पहिलो सुहागरात नै झण्डै का*ल बनेर आईलाग्दा एक नवविवाहिता दुलहीको मनमा कति चो’ट पर्ला ?
यस्तै घ’टना छिमेकी देश भारतका घ’टेको छ । बिहेको पहिलो रात नै श्रीमानले गरेको कु’कर्मले नवविवाहित श्रीमतीको झण्डै कालको मुखमा परेकी छन् । यो घ’टना भारत उत्तर प्रदेशको हो । पिताको घरबाट खुशीसाथ बिदा भएर उनी आफ्नो घरमा पुगिन् । उनका माइतीलाई एउटै कुरामा सन्तोष थियो कि–उनकी छोरीले राम्रो घरबार पाइन् । अब उनी घरमा सबैलाई रिझाएर बस्नेछिन् । तर परिवारको यो खुशी च’कनाचुर हुन बेर लागेन ।
भारतको उत्तर प्रदेशको बागपतमा ती बेहुलीको बिहे भएको थियो । उनको बिहे बागपतकै सिंघावली हरि क्षेत्रमा भएको थियो । उनका पति बागपतमै शिक्षक हुन्् । ती बेहुलीका दाजुका अनुसार बिहेको भोलिपल्ट गोदभराइको रिवाज हुन्छ । यसका लागि उनी बहिनीलाई लिन गए । त्यहाँ उनकी बहिनीलाई सञ्चो नभएको जानकारी दिइयो । कोठामा उनकी बहिनी बे’होस भएर ल’डेकाी थिइन् । परिवारले के भएको भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन् । त्यसपछि उनी बहिनीलाई लिएर धेरै अस्पतालमा गए तर डाक्टरले उपचार गर्न नसक्ने जवाफ दिए ।
त्यसपछि दाजुले सु’हागरा’तका दिन उनका पतिले नै यो सब गरेको कि’टानी जा’हेरी दिएका छन् । यद्यपि यो सब उनले किन गरे भन्ने खुल्न सकेको छैन । पति फ’रार छन् र पत्नी अहिलेसम्म बे’होश छिन् । जसका कारण त्यो रात के भएको थियो भन्ने बताउने कोही छैन । घ’टनाबारे यथार्थ थाहा पाउन पति प’क्राउ पर्नुपर्ने वा पत्नी होशमा आउनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रहरीले फ’रार पतिको खोजी गरिरहेको छ । पछि उनले बहिनीलाई लिएर गाजियाबादको मोहननगर अस्पतालमा लिएर गए । त्यहाँ जाँदा डाक्टरले निकै आ’श्चर्यजनक कुरा बताए । डाक्टरका अनुसार ती नव विवाहिताको गु’प्ताङ्गमा धा’रिलो र’डले प्र’हार गरिएको थियो । जसका कारण गु’प्ताङ्गमा ग’हिरो चो’ट लागेको छ । गर्भाशयमा समेत गहिरो चोट लागेको चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका छन् । उनको अहिले उपचार भइरहेको छ ।